Dawlada Itoobiya oo Somaliland usoo Diraysa Wafti Miisaan Leh, magacdayna Safiir ka awood Badan Wakiiladii hore ay Somaliland ugu soo Magacaabi Jirtay...
Wednesday July 22, 2020 - 13:16:54 in Wararka by Super Admin
Addis-sababa(Xogreebnews)-Ilo wareedyo Diblumaasiyadeed, ayaa tibaaxay in dawlada Itoobiya Wafti culus u dirayso Somaliland.
Waftiga ayaa sida la sheegay waxa hoggaaminaya Wasiirka Maaliyada dalka Itoobiya Axmed Shide, iyo xubno kaloo calculus. Waftiga ayaa la filaya inay Magaalada Hargeysa ee Caasimada Jamhuuriyadda Somaliland soo gaadhan todobaadkan.
Lama oga ujeedada rasmiga ah ee waftigu u imanayaan Jamhuuriyadda Somaliland, hase-yeeshee xogo ay heshay Shabakada Xogreebnews, ayaa sheegaya in dawlada Itoobiya saska qaaday waftigii Masaarida ee dhowaan booqashada ku yimi Somaliland, isla markaana kulamo la Yeeshay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo weliba Wasaarada arimaha dibada.
Geesta kale, dawlada Itoobiya oo dhowaan sababo aan la garanayn ula soo baxday wakiilkeedii Somaliland, ayaa hada dib u magacowday Safiir la Yeeshay inuu ka awood badan yahay wakiiladii hore Itoobiya usoo magacaabi Jirtay Somaliland.